Agalelekile amawele akwaBMW M
Fanelesibonge Bengu | March 26, 2021
ABAKWA-BMW eNingizimu Afrika kumele bashayelwe ihlombe ngokulanda izimoto phesheya ngesikhathi esingengakanani kade ithulwa nakwamanye amazwe.
Kwezinye izinkampani, izimoto ziqale zidayiswe phesheya ngaphambi kokuthi zilethwe kuleli, kwesinye isikhathi ngemuva kweminyaka.
Kodwa ngeM3 neM4, akukapheli sikhathi esingakanani zithuliwe kwamanye amazwe njengoba nathi lapha eMzansi sesinazo.
Sekukhulunywe kakhulu nge-grille enkulu kodwa ngokwami isijwayelekile futhi iyabukeka iyenza nemoto igqame.
Zombili zifika nenjini engu-3.0 litre six-cylinder twin turbo efuqa amandla angu-375kW netorque engu-650Nm.
La mandla athunyelwa emasondweni angemuva anamarimu angu-20 inch, njengoba awangaphambili eno-19 inch, u-gearbox oyiZF 8-speed auto engena esikhaleni weM DCT kweyaphambilini.
Lokhu kuzenza zisukise okwenhlamvu njengoba kuzithatha kuphela imizuzwana engu-3.9 ukufika ku-100km/h kanti ijubane elikhulu limiswe ku-290km/h.
Zombili zihamba ngendlela ecishe ifane nasemgwaqweni, kuba kumuntu. Mina ngithanda iM3 ngenxa yesikhala sayo kwazise inezicabha ezine futhi kuhlaleka kahle nasezihlalweni zangemuva. I-M4 ngakolunye uhlangothi, inezicabha ezimbili nokubuye kube yinkinga ukuthi kwehle abagibeli bangaphambili ukuze kungene abangemuva.
Zombili zinamathele emgwaqweni futhi yize i-suspension ithe ukuqina kodwa ziyabekezeleleka emigwaqweni enamabhampi ngenxa yokuthi yi-adaptibe M suspension futhi inama-drive mode ahlukene.
Engikuqaphelile ukuthi zizoqhatha abaningi namaphoyisa ngoba kuwubala ukungena ejubaneni. Okuhle ukuthi amabhreki azo uthaqa futhi uyakwazi ukufaka angama-carbon ceramic abiza uR140 000.
Engingakuthandanga ukuduma kwazo okungenawo u “vrrr pha” kodwa kwaBMW bathi yinto ezolunga kungekudala.
Yize kunjalo kodwa zinawo umsindo futhi uyawaphendula amakhanda abantu. Ngaphandle kwayo, umuntu ukhangwa yimibala yayo egqamile. Ngaphambili, ngale kwe-grille enkulu, kunama Laser LED headlights bese kuthi uma uthanda ufake i-carbon ezibukweni nasokhakhayini.
Ngaphakathi izihlalo ziyisikhumba kukhona ama-bucket seat owafaka uma uthanda ngaphambili akubamba thaqa. Kubuye kube umqansana ukuphuma kuwo futhi uma unomzimba omkhulu, angiboni ungahlala ukhululeke.
Inenqwaba yezinsiza zomshayeli njengePark Distance Control, Front Collision Warning, Lane Departure Warning, Speed Limit Info nokunye.
Ngasekupheleni konyaka kuza ezidonsa ngawo womane amasondo nokuzoba ngokokuqala ngqa kanjalo neM4 eyisilahla.
BMW M3 COMPETITION SEDAN R1 860 000
BMW M4 COMPETITION COUPE R1 940 000
Iwubukhosi i-Audi Q7
Kubanjwe umoya ngenkosi ethunjiwe
Abameli balaxaze uZuma kwelenkohlakalo
Umndeni ohlaselwayo usuhlala ezintabeni
Angiyena umuntu odelelayo: Ayanda Ncwane
Kuwe umuthi omkhulu emsakazweni